नालोक्सोन फार्मुलेसनहरू: नाक स्प्रे, ईन्जेक्टर, नार्कानका पेशेवरहरू र विपक्षहरू - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य समुदाय, कल्याण समुदाय प्रेस चेकआउट समाचार स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार समाचार, कल्याण समुदाय, कम्पनी कम्पनी घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि जानकारी >> तपाईंले कुन नालोक्सोन गठन गर्नुपर्छ?
तपाईंले कुन नालोक्सोन गठन गर्नुपर्छ?
यो चौंकाउने तथ्या .्क हो: प्रत्येक दिन, एक ओपियोइड ओभरडोजबाट औसत १ 130० अमेरिकीहरू मर्छन्, अनुसार रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (CDC)। त्यसलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्नको लागि, तपाईं अब कार दुर्घटनाबाट ओपिओइड ओभरडोजबाट मर्ने संभावना हुनुहुन्छ।
ओपिओइड वास्तवमा के हो? ओपिओड्स ड्रग्सको वर्ग हो जुन दुबै अवैध पदार्थहरू जस्तै हेरोइन र पर्चेन्ट ड्रग्स जस्तै फेन्टानेल र ऑक्सीकोडोन समावेश गर्दछ। यी ड्रग्सको दुरुपयोग १ 1990। ० को दशकको पछिदेखि बढ्दै छ संयुक्त राज्य अमेरिका स्वास्थ्य र मानव सेवा विभाग भर्खरै अफिओइड महामारीलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालिन घोषणा गर्दै।
एक तरीकाले चिकित्सा पेशेवरहरू, सामुदायिक आयोजकहरू, लाइपियोपल्स, र साथीहरू र लागूऔषध प्रयोगकर्ताका परिवारका सदस्यहरूले यी अनावश्यक मृत्युहरूको विरूद्ध लड्न मद्दत गरिरहेका छन् कसरी नालोक्सोन कसरी प्रशासित गर्ने भन्ने बारे जानेर। प्राय: जसलाई लाजरस औषधि भनिन्छ, नालोक्सोनले overd० सेकेन्डमा ओभरडोजको प्रभावलाई उल्ट्याउँछ।
नालोक्सोनले कसरी काम गर्छ?
यसले के गर्छ यो दिमागमा र शरीरको बाँकी भागमा जान्छ र जहाँ पनि ओपियोइड रिसेप्टरमा बसिरहेको ओपियोइड हुन्छ, यसले यसलाई रिसेप्टरको बाहिरबाट रोक्दछ, कार्यकारी निर्देशक गिन्नी लोविट बताउँदछन्। क्रिस एटवुड फाउन्डेशन र प्रमाणित मास्टर रिभिव ट्रेनर। ओपियोइड ओभरडोजमा मृत्युको पहिलो कारण हाइपोक्सिया हो, जुन अक्सीजनको कमी हो। नालोक्सोनले गर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो सामान्य सास फेर्छ। कुञ्जी, पाठ्यक्रम, त्यो हो कि नजिकै कसैले ड्रग्स बोक्दै छ।
कति व्यक्तिहरूको घरमा आगो निभाउने उपकरण छ? आगजनीले हरेक दिन सात अमेरिकीलाई मारेको छ। ड्रग ओभरडोजले अब दैनिक १ 150० भन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गर्दैछ। यदि हामीसँग आगो निभाउने उपकरणहरू छन् भने हामी किन नालोक्सोन गर्दैनौं? लोभिट भन्छन्।
शुभ समाचार यो हो नालोक्सोन सजिलैसँग उपलब्ध छ - तपाईं यसलाई फार्मेसीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ प्रिस्क्रिप्शन बिना धेरै राज्यहरूमा प्रिस्क्रिप्शन बिनाaस्थायी अर्डर (धेरै जसो फ्लु भ्याक्सिनको रूपमा, उदाहरणका लागि), र यो प्राय जसो बीमा योजनाहरूले कभर गर्दछ।
जहाँसम्म, औषधि उपलब्ध चार फर्मूलेसनहरूको साथ, कुनचाहिँ तपाईंको आवश्यकतामा उत्तम फिट हुनेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कठिन हुन सक्छ। यहाँ छ कि नालोक्सोन कसरी प्रशासित गर्ने र तपाइँले यसको चार फारामहरूको बारेमा के जान्नु आवश्यक छ:
सुई, सिरिंज र दवाईको शीशी मिलेर बनेको छ (सामान्यतया १ एमएल वा १० एमएल, क्रमशः एक र १० खुराकका लागि), इन्जेक्टेबल नालोक्सोन भनेको हो लोभिटले कोसिस गरिएको-र सही विधिलाई भनिन्छ जुन दशकौं भइसक्यो र हो एक चिकित्सा सेटिंग्स मा प्रयोग गरीयो।
पेशेवरहरू: रिभिव ट्रेनरको रूपमा उनको काममा, लोभिट भन्छिन् उनी धेरै अनौंखा रिपोर्टहरू प्राप्त गर्छिन् कि ईन्जेक्टेबल नालोक्सोनले धेरै छिटो र हल्का ढ people्गले मानिसहरूलाई फिर्ता ल्याउँदछ। हामीले धेरै व्यक्तिहरूबाट सुनेका छौं कि इन्ट्रामस्क्युलर इन्जेक्शनले फिर्ताको केही थोरै तीव्र उत्पादन गर्दछ, उनी भन्छिन्।
विपक्ष: सुई-फोबिकको लागि, इंजेक्शन योग्य नालोक्सोन सायद उत्तम विकल्प होईन। अर्को नकारात्मक पक्ष यो हो कि यो प्राय जसो फार्मेसीहरूमा उपलब्ध हुँदैन — तपाईले यसलाई समुदायमा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्फत लिनु पर्छ। (त्योले भन्यो, ईन्जेक्शन योग्य नालोक्सोन यी संगठनहरू द्वारा निःशुल्क प्रदान गरिएको छ, त्यसैले तपाईंलाई कुनै पनि आउट-अफ-पकेट खर्च हुनु हुँदैन।)
के म घर मा एक खमीर संक्रमण को उपचार गर्न सक्छु?
अर्को इन्ट्रामस्क्युलर इंजेक्शन विधि, अटोइन्जेक्टर (ब्रान्ड नाम एन्जियो) ले औषधि प्रशासनको केही अनुमान लगाउँदछ, किनकि यो प्रयोग गर्न सजिलो उपकरणमा पूर्व-मापन गरिएको र पूर्व प्याकेज गरिएको छ।
पेशेवरहरू: आपतकालिन अवस्थाको बखत सिरिंजको साथ नबसिकन यसका अतिरिक्त, अटोइन्जेक्टर श्रव्य निर्देशनहरूले सुसज्जित हुन्छ जुन तपाईंलाई प्रत्येक चरणमा हिड्दछ। लोभिट भन्छन्, यो वास्तवमै प्रयोगकर्ता-मैत्री हो।
विपक्ष: बीमा बिना, अटोइन्जेक्टरसँग एकदम ठूलो मोल ट्याग हुन्छ: दुई खुराक प्याकको लागि $ $००० जति। तथापि, निर्माता Kleo घोषणा, डिसेम्बर २०१ announced मा, कि यो एक सामान्य संस्करण एक किट प्रति more 178 को एक अधिक उचित लागत मा बेच्न को आधिकारिक हुनेछ। र जब अनुसन्धान देखाइएको छ कि एन्जियो लेबलको म्याद समाप्त हुने मिति एक वर्ष अघि प्रयोग गर्न सकिन्छ, लोभिटले चेतावनी दिन्छ कि अटोइन्जेक्टरले सञ्चालन गर्ने ब्याट्री समयावधि समाप्ति मिति भन्दा लामो लामो समयसम्म चल्दैन।
नाक एटोमाइजरको साथ नालोक्सोन
नाक नालोक्सोन एक पूर्वनिर्मित सिरिंज, atomizer, र शीशी को मिलेर बनेको छ। यो ठूलो हदसम्म पक्षबाट खसिसकेको छ, तथापि, सजिलै प्रयोग गर्न सजिलो नार्कन नाक स्प्रे (तल हेर्नुहोस्) को परिचयको साथ।
पेशेवरहरू: यद्यपि सिरिंज-ए-वायल प्रणाली इंजेक्शन नालोक्सोनसँग मिल्दोजुल्दो छ, तपाईंले कुनै पनि सुईहरूसँग डिल गर्नुपर्दैन किनकि यहाँ नाक एटोमाइजरले ड्रगलाई स्प्रेमा विच्छेद गरेको छ।
विपक्ष: लोभिट भन्छन्, यसको धेरै कम्पोनेन्ट्सको साथ नाक नालोक्सोन ऐतिहासिक रुपमा वितरण गर्न गाह्रो औषधी भएको छ। दुर्भाग्यवश केही टुक्राहरू अलग बेचेको थियो, र त्यसैले जब तपाईं फार्मेसीमा जानुहुँदा तपाईंले सबै तीन टुक्रा पाउदै हुनुहुन्छ भन्ने निश्चित गर्नुपर्‍यो, उनी बताउँछिन्। त्यहाँ केसहरू छन् जहाँ व्यक्तिहरूले औषधी पाइरहेका थिए तर तिनीहरूले यसको साथै नाक एटोमाइजर पाइरहेका छैनन्। नतिजाको रूपमा, धेरै फार्मेसीहरूले पूर्ण रूपमा यो फर्म्युलेसन बोक्न रोकेका छन्।
नरकन नाक स्प्रे
२०१ 2015 मा, एफडीएले नारकनको अनुमोदन द्रुत गतिमा ट्र्याक गर्यो, बढ्दो ओपिओइड महामारीलाई रोक्नको लागि एजेन्सीले स्वीकृत गरेको पहिलो नाक नालोक्सोन स्प्रे।
पेशेवरहरू : नर्कन, यसको पूर्व-मापन खुराक र प्रि-एसेम्ब्ल्ड प्याकेजि withको साथ, प्रशासन गर्न सजिलो विधि हो। लोभिट भन्छ, यो उत्पादन प्रयोग गरी पेंच गर्न गाह्रो छ। अटोइन्जेक्टरको साथ, यो एक पर्स वा ब्याकप्याक बोक्नको लागि सबैभन्दा विवेकयुक्त सुत्र पनि हो।
विपक्ष: बीमा बिना, नरकन यसको गैर- FDA- अनुमोदित नाक नालोक्सोन समकक्ष भन्दा अधिक महँगो छ ($ 50 को एक खुराकको तुलनामा $ १$० को एक खुराक)।
क्याफिन पाउडर मार्न सक्छ:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
के म एडविल र ibuprofen सँगै लिन सक्छु?
के तपाइँ योजना बी लिएको एक हप्ता पछि गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ?
कति समय पिउने पछि म बेनाड्रिल लिन सक्छु
मांसपेशी दुखाइ को लागी म्याग्नेशियम को सबै भन्दा राम्रो प्रकार
कति समय लाग्छ यो meloxicam को लागी काम गर्न को लागी